3-D Account-Based Marketing (ABM): Nzira Yokuunza Kushambadzira Kwako kweB2B kuHupenyu | Martech Zone
Sezvo isu tichiwedzera kuita basa redu uye hupenyu hwepachedu pamhepo, hukama hweB2B nekubatana zvakapinda mune imwe hybrid dimension. Akaunti-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM) inogona kubatsira kutumira mameseji akakodzera pakati pekuchinja kwemamiriro uye nzvimbo - asi chete kana makambani achienderana nekuoma kwenzvimbo yebasa nehutsva hutsva hwetekinoroji hunobatanidza data remhando, fungidziro yekufungidzira, uye chaiyo-nguva synergies.
Yakakonzerwa neiyo COVID-19 denda, makambani kutenderera pasirese akafungazve hurongwa hwekushanda huri kure.
Vanoda kusvika hafu yemakambani akaongororwa neCNBC anoti achatora maHybrid office modhi, nevashandi vanoshanda-nguva kubva kumba, nepo mumwe wechitatu achiti vachadzokera mu-munhu-kutanga mamiriro.
Vanopfuura hafu yevashandi vekuUS vanosarudza basa riri kure vari kusarudza kusiya kwete kudzokera kuhofisi, zvichitungamira masangano ekutengesa kuti asanganise mazita avo ekusangana sebhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) vatengi vanosiya makambani ekare votanga kune matsva.
Munguva yese yedenda, kushambadzira kwedhijitari kwakaratidza nzira yekubatanidza neyakananga account uye tarisiro pakati pekudzimwa mu-munhu zviitiko nemisangano. Kunenge hafu yemakambani emabhizinesi anoti kushambadzira kwavo kwaita shanduko "inoshamisa". panguva yedenda, neABM ichikwira kumusoro. Vana muzvishanu vatungamiri vemabhizinesi ekutengesa vanoti vachawedzera mari muABM mugore rinotevera; iyo-kune-imwe, yakasarudzika yekubatanidza inogoneswa neABM inogona kuburitsa mari inokwira inosvika makumi matatu muzana kana ichienzaniswa neyechinyakare-kune-akawanda mishandirapamwe.
Kuti uwane izvo zvinogoneka, zvisinei, mabhizinesi eB2B mafemu anofanira kutora nzira yakabatana. Artificial intelligence (AI) uye kudzidza muchina (ML) inogona kubatsira makambani kuona zvakatsvakwa kwenguva refu maonero emutengi chete- asi chete kana vakazvipira kune matatu-dimensional data zano.
Iwo matatu Dimensions eABM Data
Data Quantity uye Quality
Dhata kubva kune tekinoroji muongorori Forrester inoratidza kuti isingasviki matatu muzana mapoinzi anopatsanura epamusoro gumi chiteshi muchikamu chezvinobva vatengi veB10B vanobvunza kana vachitsvaga vangangove vatengesi - zvichiratidza kuti makambani anofanirwa kunge achitsetsenura mumhando dzakawanda uye kushandisa ese ma touchpoints anawo kuti abatanidze nawo. tarisiro uye uvashumire iwo akakodzera emukati anofambisa sarudzo dzekutenga.
Pamusoro pezvo, makambani emabhizinesi anovimba nekutengesa kukwidziridzwa, zvigadziriso, uye zvigadzirwa zvitsva kana masevhisi kune vatengi varipo vangangove vatove nemaprofile evashandisi zvichienderana nekuita pawebhusaiti yekambani, mukati memaforamu ayo ekutsigira, uye mamwe mapuratifomu ane muridzi.
Iyi data inoumba musana weABM inoshanda. Asi nepo huwandu hwe data hwakakosha, mamiriro uye mhando zvakangokosha, kunyangwe zvakanyanya kuoma kubata. Mafemu emabhizinesi anoyera usability uye kubatanidzwa kwedata sepakati pematambudziko avo epamusoro eABM, Forrester yakawana. Semuyenzaniso, munzvimbo dzakasiyana siyana dzedunhu rekambani imwe chete, mishandirapamwe yemuno inogona kuunganidza mapoinzi akasiyana edata anoratidza kunetsa kuwiriranisa. Yakakwana ABM mhinduro inogona kugamuchira akasiyana ega ega uchishandisa algorithmic njere kududzira nemazvo uye kubatanidza ruzivo.
Vatengesi vazhinji zvino vanovimba neAI kuti vaongorore mukana wekuti vangave vatengi, vachishandisa algorithms akaomesesa anosanganisa kudyidzana kwakapfuura pamwe nemhedzisiro mhedzisiro zvichienderana neakafanana maitiro profiles. Aya mamodheru ekufungidzira akakosha kuti makambani akwanise kuendesa ega ega kushambadzira pamwero.
Kufembera kwealgorithmic uye kurudziro inovandudza nekufamba kwenguva sezvo kudyidzana kwakawanda kunoitika - asi ivo zvakare vanovimba nemitemo yebhizinesi yakaumbwa neindasitiri zviyero, tsika dzedunhu kana makarenda, uye zvimwe zvinhu zvega kune yega B2B sangano. Zvikwata zvemukati zvinofanirwa kukwanisa kupesvedzera mamodheru ekufungidzira, kusimudzira simba reAI rekugadzirisa nekunzwisisa kwevanhu, kugadzira mishandirapamwe ine kukosha kwakanyanya.
Data Chaiyo-Nguva Kugona, Uye Kuda Kuvaendesa
Mamiriro enguva yakakodzera akakosha kune mishandirapamwe yeABM kuti itumire meseji chaiyo kunzira dzakakodzera kune yakapihwa tarisiro nhanho murwendo rwekufunga nezvekutenga. Nekuti tarisiro yevanoita zvepamhepo inogashira kuenderera mberi kutumira mameseji kwemaminitsi makumi maviri zvakanyanya, zviziviso zveotomatiki zvezvikwata zvekutengesa uye zvemunhu mameseji mameseji zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuonana nekukurumidza munzvimbo dzakakosha dzesarudzo.
Iko kugona kwehunyanzvi kunogona kuve kunonetsa kuwana, asi kune mamwe mafemu, kuvaka kuvimba mune yekushambadzira data inodiwa kuti uite zvakanyanya otomatiki kwakangofanana nedambudziko. Forrester akawana mamwe mafemu emabhizinesi makuru kupfuura makambani madiki anoti "kushomeka kwekutengesa kutenga-mukati" imhinganidzo yekubudirira kweABM. Inotyairwa nedatha, yakazvimiririra ABM inoda kushambadzira uye kutengesa kuti ibatane, inotsigirwa nehungwaru hwemuchina unogonesa kupindurwa kwechokwadi-nguva kuyera.
Kudyidzana Dimensions Inoda Robust Technology
Nepo imwe neimwe yeaya matatu dhata dhata yakakosha, hapana imwe inomira mhinduro. Mazhinji makambani atove nedata rakawanda, asi achishaya maturusi ekubatanidza uye kuita pane yakavharwa ruzivo. Predictive analytics inogona kupa tarisiro yekumberi, asi inoda mhando yenhoroondo data kuti ibudise kurudziro yakakodzera. Uye chete nekushandisa ML uye ruzivo rwe data kutyaira kutengesa uye kushambadzira chiitiko makambani anogona kugadzira iyo yakakodzera nguva yekubatanidza iyo inovhara zvibvumirano mumusika unoramba uripo.
Kuti ubatanidze zvinhu zvese zvitatu uye kutyaira ABM budiriro, makambani anofanirwa kutsvaga yekupedzisira-kusvika-kumagumo ABM chikuva chinogonesa kubatana kwedata, AI-powered hungwaru uye chaiyo-nguva kugadzirisa. Kuita kwakaratidza mumatunhu akakosha uye kugona kugadzirisa kushuma uye kushanda kwemapoka ega ega uye zvikwata zvinogonawo kubatsira makambani kugadzirisa maitiro avo eABM kuti abudirire mumusika une simba.
Nehupfumi hwepasi rose mukushanduka, nzvimbo nyowani dzebasa dzakasanganiswa uye maitiro ekutenga eB2B ari kushandura kutengesa kwebhizinesi nekushambadzira. Yakashongedzerwa nesimba, AI-powered ABM mapuratifomu, makambani eB2B anogona kushandisa data mumativi matatu kuti ape meseji inoenderana neazvino bhizinesi mamiriro, kugadzira hukama hunogara.
Tags: abmabm dataaccount-based kushambadzirab2b kushambadziraDatadata datadata uwandumrpdata yekufungidzirachaiyo-nguva data